ဘိုးအင်း ၇၇၇ - ဝီကီပီးဒီးယား
(Boeing 777 မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
Boeing 777-219(ER) Air New Zealand.
ဘိုးအင်း 777 လေယာဉ်မှာဘိုးအင်းလေယာဉ်ပျံကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကတီထွင်ထုတ်လုပ်တာဝေးပစ်ကျယ်ပြန့်ခန္ဓာကိုယ်အင်ဂျင်နှစ်လုံးတပ်ဂျက်လေယာဉ်ခရီးသည်တင်လေယာဉ်များ၏မိသားစုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး twinjet ဖြစ်ပြီး 5.235 9.380 မှရေမိုင် (17,372 ကီလိုမီတာ 9,695) ၏အကွာအဝေးနှင့်အတူ 314 451 မှခရီးသည်များအတွက်ပုံမှန်ဆံ့ပါတယ်။ အများအားဖြင့် "Triple ခုနစ်ပါး" အဖြစ်ရည်ညွှန်း,  ၎င်း၏ထူးခြားသောတစ်ခုချင်းစီရဲ့အဓိကဆင်းသက်ဂီယာတစ်ခုမြို့ပတ်ရထားယာဉ်ကိုယ်ထည်ကို cross-အခန်းနဲ့ဓား-shaped ပေါ်ရှိမည်သည့်လေယာဉ်ပျံ၏အင်ဂျင်တွေ, ခြောက်လရထားဘီး turbofan အကြီးဆုံး-အချင်းတို့ပါဝင်သည် အမြီး Cone ။ ရှစ်အဓိကလေကြောင်းလိုင်းနှင့်အတူညှိနှိုင်းတိုင်ပင်အတွက်ထုတ်လုပ်သည် 777 အဟောင်းတွေကျယ်ပြန့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုခရီးသည်တင်လေယာဉ်ကိုအစားထိုးနှင့် Boeing ရဲ့ပထမဦးဆုံးယင်ကောင်-by-wire ကိုလေယာဉ်နှင့်အမျှဘိုးအင်းရဲ့ 767 နှင့် 747. အကြားစွမ်းရည်ခြားနားချက်ပေါင်းကူးဖို့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့် computer- ရှိပါတယ် mediated ထိန်းချုပ်မှုများ, ဒါကြောင့်လည်းပထမဦးဆုံးကွန်ပျူတာကိုလုံးဝ-ကူညီခဲ့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲစီးပွားဖြစ်လေယာဉ်ပျံသည်။
အဆိုပါလေယာဉ်မှာဘိုးအင်း 777 လေယာဉ်မှာဘိုးအင်း 747 များအတွက်အစားထိုးစေ၏, ဒါပေမယ့်ပိုပြီး efficient ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ဘိုးအင်း 777 လေယာဉ်သည်ကမ္ဘာ့အ bijet (ကို double အင်ဂျင်) ဖြစ်လာ, 747 ကိုအစားထိုးဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သော။ အကြီးမားဆုံး၏ Issue 777 777-300 နှင့်အဝေးဆုံးအကွာအဝေးအ 777-200LR ဖြစ်ပါတယ်။ စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု, ယူအေအီး၏အမျိုးသားရေးလေကြောင်းလိုင်းလေယာဉ်ပျံ 777 ၏အကြီးဆုံးအော်ပရေတာဖြစ်ပါတယ်။
↑ Robertson၊ David။ "Workhorse Jet Has Been Huge Success with Airlines that Want to Cut Costs"၊ The Times၊ London, England, United Kingdom: Times Newspapers၊ March 13, 2009။ March 20, 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on June 12, 2011။
↑ Grantham, Russell (February 29, 2008). "Delta's new Boeing 777 Can Fly Farther, Carry More". “Delta will put the new "triple seven" — as airline folks call the jet — into service March 8.”
Wikimedia Commons တွင် Boeing 777 နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
777 Family official webpage on Boeing.com
777-200 cutaway diagram on Flight International
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘိုးအင်း_၇၇၇&oldid=422166" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၈၊ ၁၆:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။